DBA | YEC
မန္တလေးမြို့ရဲ့ အောင်ချက်အများဆုံး DBA သင်တန်းကျောင်း
Diploma in Business Administration ဖြစ်ပါတယ်။
LCCI (UK) အဖွဲ.အစည်းက ပေးအပ်သည့် Level3Diploma ဖြစ်ပါတယ်။ LCCI (UK) မှာ Accounting, Marketing ဆိုပြီး ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့် မန္တလေးမှာ အများစုက LCCI (UK) ဆိုလျှင် Accounting သာ ပြေးမြင်ကြပါသည်။
Business Administration ဆိုတာ?
Management ရဲ့ function လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို Strategic Management, Operational Management နဲ. Administrative Management ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Administrative Management ဆိုတာကတော့ Company အတွင်းမှာရှိတဲ့ information flow တွေနဲ့ Strategic Level မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ မဟာဗျူဟာတွေကို အကောင်ထည်ဖော်ရာမှာ ကူညီပေးရပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ်မှာ Communication နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Writing Communication၊ Verbal communication၊ Non-verbal communication အစရှိတာတွေ လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး meeting တစ်ခုကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ၊ meeting minute ဘယ်လိုမှတ်ရမလည်းဆိုတာတွေ သင်ကြားရပါမယ်။
Email တစ်စောင်ပို့ရင် ပါရမည့်အချက်တွေ။ ဥပမာ ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူဆို Yours faithfully ဆိုတာမျိုး၊ နာမည်သိရင် Yours Sincerely ဆိုတာမျိုးအပြင် ကိုယ်နဲ့ခင်ရင် Best Regards ရေးရတာမျိုးတွေပါပါတယ်။ Company တစ်ခုအတွက် Diary System တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာတွေပါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Team တွေကို ဘယ်လို Lead လုပ်ရမလဲ၊ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုMotivate လုပ်ပေးရမည်ဆိုတာတွေပါပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်လိုအချက်တွေကို confidential လျှို့ဝှက်ထား ရမယ်၊ System တွေ၊ Information တွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမည်ဆိုတာတွေ သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Business Principle and Practice
ဒီဘာသာရပ်မှာတော. စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်၊ CSR အပိုင်းတွေ၊ Company နဲ့တိုက်ရိုက် (သို့)သွယ်ဝိုက်ပြီး သက်ရောက်မှုရှိတဲ stakeholder တွေအကြောင်း၊ IT က စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေလဲဆိုတာကို သင်ရပါမယ်။ နောက် နိုင်ငံတကာ companies တွေ ဝင်ရောက်လာမှုရဲ့ေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး၊ Franchise လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး၊ Organizational structure, Management style, Motivation နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Theory တွေကို သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Production Methods တွေ၊ Quality Management နှင့် Financial Accounting နဲ့ Management Accounting ဘာသာရပ်တွေ သင်ရပါမယ်။ အခန်းလေးမှာတော့ Strategic Planning အပိုင်းဖြစ်ပြီး Vision, Mission, PESTLE analysis, SWOT, Competitor Analysis, Porter’s5forces, business plan မှာဘာတွေပါရမလဲ၊နောက်တစ်ခုက Change Management အကြောင်းတွေစုံစုံလင်လင်သင်ရပါမယ်။အခန်းငါးမှာတော့ Performance measure ပိုင်းမှာ Financial နဲ့ Non-financial performance measure တွေ၊ Balance Scorecard တွေနဲ့ Performance Appraisal ကို စုံလင်လင်သင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. ICT skill
ICT skill မှာတော့ ရုံုးလုုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုမည့် Powerpoint နဲ. Microsoft word ကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲကို British Council မှာဖြေရပါတယ်။ Business Administration ကို $43, Business Principle and Practice $43, ICT skill (Microsoft word + Powerpoint) $58. Total = $ 144 ခန်.မှန်းခြေ ၁၉ ၀၀၀၀ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
Exam ကို တစ်နှစ်သုံးကြိမ် April, June နဲ့ Nov မှာဖြေရပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့လမှာ ဖြေလို့ရပါတယ်။ စာမေးပွဲမတိုင်ခင် British သံရုံးကိုု သုံးလကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရပါတယ်။ Diploma က UK ကပေးတဲ. Diploma ပါ။ Level3ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲကို နှစ်နှစ်အတွင်း ပြီးအောင်ဖြေဆိုုနိုင်ပါတယ်။
ICT skill စာမေးပွဲဖြေဖို့ ကျောင်းသားဆယ်လောက်လိုတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလား?
မှန်ပါတယ်။ Microsoft word (သို့) powerpoint တစ်ဘာသာချင်းဖြေပါက စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူ အနည်းဆုံးဆယ်ယောက်လိုပါတယ်။ နှစ်ဘာသာကို တစ်ရက်တည်းဖြေမည်ဆိုပါက ငါးယောက်သာလိုပါတယ်။ Y.E.C Learning Center မှာ တက်ရတဲအားသာချက်တစ်ခုကတော. ဖြေဆိုတဲ့ကျောင်းသားများတဲ့အတွက် ICT skill ဖြေဆိုရာမှာ အခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေပါတယ်။
DBA စာမေးပွဲ အောင်ချက် အရမ်းနည်းပါတယ်။ မှန်ပါသလား?
Y.E.C Batch3မှာ ဂုဏ်ထူးထွက်တဲ့သူ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား သုံးဦးရှိပါတယ်။ တစ်ဘာသာချင်း သို့ ဘာသာစုံအောင်တဲ့သူ pass with merit ( အမှတ် ၆၀) အထက် ကျော်တဲ့သူ ဆယ့်ငါးယောက်တိတိရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ပိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်မူတည်ပါတယ်။
Dec 31 ရက်နေ.စတင်ပါမည်။
စနေ 9:00 AM to 11:30 AM
သင်တန်းကြေး 280,000 ကျပ်
စာအုုပ်စာတမ်းကြေးအားလုံုးအပြီးအစီး 10000 ကျပ်
ကွန်ပြူတာ သင်တန်းချိန် နာရီ 20 ပါဝင်ပါမည်။
သင်တန်းကာလ5လ
လူဦးရေ ကန်.သတ်ထားပါသဖြင့် နောက်ခြောက်လ နေမှ မတတ်ရလေအောင် ကြိုတင်သင်တန်းအပ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဘာလို့သင်တန်းကြေး တခြား center တွေထက်ပိုုများတာလဲ?
တစ်ပတ်ကို နှစ်ရက်သင်ပါတယ်။ တစ်ရက် နှစ်နာရီ တစ်ပတ် လေးနာရီ ပါ။ ICT skill အတွက် နာရီ 20 ပြီးပါကလည်း အခမဲပြန်တက်နိုင်ပါတယ်။
၃၉ လမ်း(ဗန်းမော်တိုက်လမ်း)၊ ရ၁ လမ်းနှင်. ရ၂ လမ်းကြား၊ ရာဇာစင်တာ၊ မန္တလေးမြို.။
📞09794461888, 09792345611, 09792345622